Qaramada Midoobay oo ka digtay dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya | Berberanews.com
Home WARARKA Qaramada Midoobay oo ka digtay dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya
Qaramada Midoobay oo ka digtay dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan oo hortagay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa waxaa uu ka warbixiyay xaaladda Soomaaliya iyo doorashooyinka la filayo in sanad kadib ay dalka ka dhacaan.
Swan ayaa sheegay in indhaha lagu wada hayo doorashada 2020-ka, waxaana uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in barlamaanka uu meel mariyo nooca doorasho ee ay Soomaaliya yeelaneyso iyo in al dhaqangeliyo wax ka badelkii lagu sameeyay xeerka axsaabta siyaasadda kahor dabayaaqada Disembar.
Guddiga doorashooyinka madaxabanaan ee Soomaaliya maxaa u qorsheysan?
Xilli doorashada Soomaaliya ay ka hadhay sanad ayaa wali waxaan kala cadeyn nooca doorasho ee uu dalka yeelanayo, maadaama sharciga doorashada uu horyalao barlamaanka, dhawaanna la filayo in uu go’aan ka gaaro.
Guddoomiyaha barlamaanka ee Soomaaliya, Maxamed Sheikh Cabdiraxmaan Mursal ayaa guddi ka soo tala bixiya nooca doorashada u saaray, guddigaas oo booqasho ku tegay maamulada dalka, si ay usoo ogaadaan aragtidooda ku aadan doorashada.
Hasayeeshee guddiga doorashada ee Soomaaliya oo ay guddoomiye u tahay Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) oo la hadashay BBC-da ayaa sheegtay in haddii barlamaanka uu meel mariyo sharciga doorashada, ay diyaar u yihiin in bisha Maarso ee sanadka cusub bilaabaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
“Tallaabada xigta waxaa waye in aan helno shuruuc, doorasho, dastuurka kumeel gaarka ahaa waa jiraa, sharciga gudidga doorashada uu ku shaqeynayay waa jiraa, waxaa naga maqan sharciga doorashooyinka oo barlamaanka horyaalla, oo noo madalsan in aan helno bisha Diseemabr, tallaabada xigta waxaa waaye in aan sameyno diiwaangelinta”, ayay BBC-da u sheegtay Xaliimo Yarey.
Waxay intaa raacisay in shaqa badan ay qabteen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, sidoo kalena aan loo baahneyn tirakoobka dadka oo ay tirakoobayaan dadka codeynaya.
“Tirada aan helno ee Soomaaliyeed ee timaada goobaha codbixinta aan cayimi doonaa oo nabadgelyada iyo siyasadda noo saamaxdo ayaa sheegi karn inta qof ee aan diiwaangelinay, annaga waxaa ku hamineynaa ilaa laba milyan oo Soomaali ah ama ka badan in aan helno”, ayay raacisay.
Qaabka ay doorashada uga dhici doonto dhulka ay maamulaan Al Shabaab iyo Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbaaninnida ee Somaliland ayay sheegtay in lagu qeexi doono sharciga doorashada oo haatan horyaalla baarlamaanka.
Inkastoo guddiga doorahsada uu u muuqdo in uu doonayo in dalka uu ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah, haddii barlamaanka uu meelmariyo sharciga doorashada ee horyaalla ayaa hadana qaar kamid ah dhinacyada siyaasadda waxaa ay su’aal geliyeen suurtagalnimada arrintaas.
Guddoomiyaha xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo maalma ka hor la hadlay BBC-da ayaa sheegay in taas aysan suurtagal ahayn.
“In doorasho qof iyo cod ah dalka looga qabto, waa in tirakoob la sameeyo, diiwanagelin in la sameeyo, sharciga jinsiyadaha in la sameeyo, dhaqaalaha waxaas oo dhan sababi lahaa la helo, in heshiis siyaasad la gaaro oo dhinacyada siyaasadda oo ay ka mid yihiin Dowladda Federaalka, Dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadda ay gaaraan”, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdi-Shakuur.
Wuxuu intaa ku daray in doorasho qof iyo cod aysan maangal ahayn iyadoo intaas oo dhan ay maqan yihiin.
Previous articleThe Economic growth of Somaliland -KNTV
Next articleXoghayihii Duulista Iyo Hawada Waddani Nuuradiin Diini oo Ka Baxsaday Xisbigaasi ” Waar Bilaa Jiho ayuu Nagu Noqday, Ma In Anigana Lay Xidho ayay Habaryoonis Doonaysaa “